के हो एन्टी एजिङ ? कसरी बँच्ने ? | Daily News Pokhara के हो एन्टी एजिङ ? कसरी बँच्ने ? – Daily News Pokhara
Home Health के हो एन्टी एजिङ ? कसरी बँच्ने ?
Dec 04, 2017, 11:21 am0
जन्मदा हाम्रो छाला कोमल हुन्छ । त्यसमा चमक हुन्छ । आभा हुन्छ । तर, उमेर बढेसँगै त्यो चमक बिस्तारै हराउन थाल्छ । छालाको रंग फिका हुँदै जान्छ । रुखो हुन्छ । चाहुरिदै जान्छ । दाग-धब्बा आउन थाल्छ । जब हामी प्रौढ उमेरमा प्रवेश गर्छौ, छाला रुखो, फिका र जिर्ण हुनपुग्छ । यो नियमित र प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।दुखलाग्दो के भने हामीमा आफ्नो उमेरभन्दा चाडै यस्तो संकेतहरु देखापर्न थाल्छ, जसले बुढो देखाउँछ । युवावयमै हाम्रो अनुहारको रंग उड्न थाल्छ । चाहुरी पर्न थाल्छ । दागहरु देखिन थाल्छ ।२० बर्ष उमेर पार गरेपछि हाम्रूो छालाको कोशिका पुनर्निमाण हुने क्रम धिमा हुन्छ । यसले छालामा सिथिलता ल्याउँछ । यसले कोलेजोन र इलास्टिनको कमी हुनपुग्छ । कोलेजेन र इलास्टिन प्रोटिनको प्रकार हो, जो छाला एवं कोशिकामा पाइन्छ । यसले छालालाई बलियो र लचिलो बनाइराख्न सहयोग गर्छ ।हाम्रो छाला किन समयभन्दा अघि रुखो हुन थाल्छ, किन लचिलोपन हराउन थाल्छ ?यसमा आन्तरिक र बाह्य कारण छन् ।घामको सोझो असर, धू्रलो धुँवा आदिको कारण छाला छिटो प्रभावित हुन्छ । त्यसबाहेक छालामा लगाइने कृतिम क्रिमहरुले पनि यसको सौन्दर्य नष्ट गर्छ ।अर्को कारण चाहिं हाम्रो उमेर हो । उमेर बढ्दै गएपछि छाला पातलो हुँदै जान्छ । छाला र मांसपेशीवीचको बोसो कम हुन्छ । यसले गर्दा अनुहारको छाला झोलिन थाल्छ । छाला सिथिल हुन्छ ।जब छाला पातलो हुन्छ, तब नाजक र असुरक्षित हुन्छ । त्यसले चाहुरीपना हुने समस्या बढाउँछ । सुख्खा हुने, रुखो हुने, दाग देखिने समस्या पनि खाउन थाल्छ ।
यसका लागि हामी छोटो र छरितो बाटो अपनाउने गर्छौ । त्यो भनेको फेसियल, कृतिम क्रिममो प्रयोग आदि । यसले दीर्घकालिन फाइदा दिंदैन ।खासमा छालाको चमक कायम राख्नमा हाम्रो आन्तरिक परिवर्तन नै महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो खानपान, जीवनशैलीले यसमा खास प्रभाव पार्छ । सवैलाई थाहा भएकै हो, छालाको चमक जोगाइराख्न पानी वा तरल पदार्थको सेवन महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसबाहेक जुस, ताजा फलफूल आदिको सेवन फाइदाजनक हुन्छ ।पेटको समस्याले पनि छालामा असर गर्छ । त्यसैले सुपाच्य खानेकुरा आवश्यक हुन्छ ।घामको सोझो किरणले छालालाई हानी गर्छ । घरबाहिर हिँडडुल गर्दा अनुहारको छाला जोगाउनु पर्छ । माक्स, सनग्लासको प्रयोग उपयोगी हुन्छ । धेरै समय घाममा बस्दा पनि त्यसले छालामा असर पुर्‍याउँछ ।
Previous Postअष्टमीको हत्यारा साईमन काजी बल्ल पुगे प्रहरी खोरमा!! आफ्नो सुरक्षाको बारेमा बोले रबि Ravi Lamichhane Next Postयस्तो देखियो नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको चुनाव प्रचार शैली : कोमलको सेल्फीदेखि आरजुको सूर्यलाई नमस्कारसम्म